传道书 1 CCB - Ɔsɛnkafo 1 AKCB
Biribiara Yɛ Adehuhuw
1Eyinom ne nsɛm a Ɔsɛnkafo, ɔhene Dawid babarima a ɔyɛ ɔhene wɔ Yerusalem se:
Ɔsɛnkafo no na ose.
“Ahuhude mu ahuhude
Biribiara yɛ ahuhude.”
3Dɛn na onipa nya fi nʼadwumayɛ nyinaa mu,
nea okum ne ho yɛ no owia so no?
4Awo ntoatoaso ba na ɛkɔ,
nanso asase tim hɔ daa.
5Owia pue na owia kɔtɔ,
na ɛyɛ ntɛm kɔ nea epue fii hɔ no.
6Mframa bɔ kɔ anafo fam
na ɛdan hwɛ atifi fam;
ekyinkyin kɔ baabiara,
na ɛsan bɔ fa ne kwan so.
7Nsubɔnten nyinaa sen kogu po mu,
nanso po nyɛ ma da.
Faako a nsubɔnten no fi no
hɔ na wɔsan kɔ bio.
8Biribiara yɛ ɔbrɛ
a ɛboro nea obi bɛka so.
Ani nhwɛ ade nwie da
na aso nso ntie nsɛm mma ɛnyɛ mma da.
9Nea aba no bɛba bio,
nea wɔayɛ no, wɔbɛyɛ bio;
ade foforo biara nni owia yi ase.
10Biribi wɔ hɔ a wobetumi aka wɔ ho se:
“Hwɛ! eyi yɛ ade foforo” ana?
Ɛwɔ hɔ dedaw fi tete nteredee;
ɛwɔ hɔ ansa na wɔwoo yɛn.
11Wɔnkae tetefo no,
na wɔn a wonnya nnwoo wɔn no nso,
wɔn a wobedi wɔn akyi no
Nimdeɛ Yɛ Ahuhude
12Me, Ɔsɛnkafo, na meyɛ Israelhene wɔ Yerusalem. 13Mituu me ho sii hɔ sɛ mede nimdeɛ besua ayɛ nhwehwɛmu wɔ biribiara a wɔyɛ no owia yi ase ho. Adesoa duruduru a Onyankopɔn de ato adesamma so! 14Mahu biribiara a wɔyɛ no owia yi ase; ne nyinaa nka hwee, ɛte sɛnea obi tu mmirika taa mframa.
15Nea akyea no wontumi nteɛ;
na nea enni hɔ no wontumi nkan.
16Mekaa wɔ me tirim se, “Hwɛ, manyin na manya nimdeɛ bebree asen obiara a watena Yerusalem ahengua so ansa na merebedi ade. Manya nhumu ne nimdeɛ mu osuahu.” 17Afei meyɛɛ mʼadwene sɛ mɛhwehwɛ na mate nimdeɛ, ne adammɔsɛm ne nkwaseasɛm ase. Nanso mihuu sɛ eyi nso te sɛnea obi tu mmirika taa mframa.
18Nimdeɛ bebree de awerɛhow na ɛba;
nyansa dɔɔso a, awerɛhowdi dɔɔso.
AKCB : Ɔsɛnkafo 1